Kwivenkile yaseMelika yaseMelika, iimaski zisanyanzelekile | Ndisuka mac
Yinto enye ukwazisa Biden ngokusemthethweni, kwaye yahluke kakhulu into ukuyenza Tim Cook ezivenkileni zabo. E-US, abantu abasele begonyelwe i-COVID-100 sele beyi-19% ngoku bangahamba ngaphandle kwesigqubuthelo esitratweni nangaphakathi kwezakhiwo. Kunyanzelekile kuphela kwizithuthi zikawonkewonke.
Kodwa u-Apple ukholelwa ukuba eli nyathelo mhlawumbi lisengxamile, kwaye kunokuba sisikhuthazo esivela kurhulumente wase-US kubantu abasigonyileyo ukuba benze njalo kungekudala, kwaye ke bakwazi ukususa imaski eyonwabileyo. Ke ngoku, kuzo zonke iivenkile zaseMelika zaseMelika, i imaski kunyanzelekile.
I-United States lelinye lawona mazwe ahambele phambili kwiplanethi ngokubhekiselele kubemi abagonyelweyo Covid-19. Kakhulu, ukuba umongameli wayo uBiden sele ebhengeze kule veki ukuba amaMelika asele egonyiwe nge-100% anokuhamba ngokukhululekileyo ngaphandle kwemaski.
Ezinye iivenkile zaseMelika ziye zasamkela ngokukhawuleza isibhengezo sikaMongameli Biden, ezinje Costco y WalMart. Bakholelwa ukuba ngaphakathi ngaphakathi kwiivenkile zabo ngaphandle kwesigqubuthelo kuya kukhuthaza abathengi ukuba beze kubo, ngokuba bekhululeke ngakumbi, kwaye yindlela yokukhuthaza ukuthengisa.
Kodwa iApple sele inxibelelana nazo zonke iivenkile zayo zaseMelika okwangoku, iya kuqhubeka nokufuna ukusetyenziswa kwemaski ngaphakathi kumaziko alo, kokubini ngabasebenzi kunye neendwendwe. Kwisetyhula efanayo, ukwathe inkampani iyaqhubeka nokuvavanya amanyathelo ezempilo nokhuseleko, kwaye eyona nto iphambili kuyo kukhuseleko lwabasebenzi kunye nabathengi.
Kule ngxelo, akukho mhla ubekiweyo wokuphela kwemiqathango yokhuseleko enyanzelekileyo. Kucacile ukuba yonke into iya kuxhomekeka kwindlela ubhubhane ovela ngayo EUnited States. Kodwa ngethamsanqa, ukukhanya sele kubonakala ekupheleni kwetonela. Okuncinci kuyalahleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iimaski zisanyanzelekile kwiiVenkile zeApple eMelika